Farmaajo oo Casuumay Wiil Soomaaliyeed oo Ku Guulaystay Tartanka Quraanka Kariimka Aduunka | SAHAN ONLINE
Farmaajo oo Casuumay Wiil Soomaaliyeed oo Ku Guulaystay Tartanka Quraanka Kariimka Aduunka
MUQDISHO – Axmed Burhaan Maxamed oo ah Wiil Somali Maraykan ah oo ku guulaystay tartanka abaalmarinta dubai ee caalamiga ah ee Quraanka Kariimka ah, ayaa lagu casuumay xarunta madaxtooyadda villa Somaliya Magaaladda Muqdisho.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa marti qaad u fidiyey wiilkan dhalinyaradan oo ka guuleystay in ka badan 100 qof oo adduunka ka kala yimid, kuna tartameyey Quraanka Kareemka ah, waxaana lagu wadaa inuu toobaadkan in uu soo gaaro Soomaaliya.
Axmed oo 17 jir ah ayaa u sheegay warbaahinta dalka Maraykanka in uu aad ugu faraxsan yahay xiriirka ay la soo sameysay Madaxtooyada Soomaaliya, isla markaasna ay qiimoweyn u leedahay in uu la kulmo Madaxweyne Farmaajo.
“Waa wax aad u farxad badan, ma aanan fileynin. Waxay iiga dhigantahay maamuus iyo ixtiraam aad u badan.”ayuu yiri Maxamed.
Madaxweyne Farmaajo ayaa tan iyo xilka inta uu qabtay waxa uu maamuus iyo marti qaad u sameeyey qaar ka mid ah dadka hal abuurka leh sida abwaanno,qorayaal, ciyaartooy farshaxanaystayaal, iyo dhallinyaro kaalimaha hore ka galay tartannada Quraanka Kareemka ah.